Public Health in Myanmar: Anorexia Nervosa
အစား မစား နိုင်သော ရောဂါ
“အစား မစား နိုင်သော ရောဂါ (Anorexia Nervosa)” ဟာ စိတ်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ အစား မစားနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ စားရမဲ့ သောက်ရမဲ့မို့ မစားနိုင်တာ၊ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချွတ်ယွင်းချက် (ဥပမာ အစာအိမ်ရောဂါ) ကြောင့် မစား နိုင်တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မကြာသေးခင်က Channel4အစီအစဉ် တစ်ခု ပြသွားခဲ့ပါတယ်။ အသက် ရှစ်နှစ်ပဲ ရှိသေးတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက် ကို အခြေခံပြီး ရိုက်ထားတာ သနား စရာလည်း ကောင်း၊ ကြောက်စရာ လည်း ကောင်း၊ ကြည့်သင့်တဲ့ အစီအစဉ်မို့ လင့်ခ် ထည့်ပေး လိုက်ပါတယ်။
အရိုးတွေ ပေါ်အောင် ပိန်နေမှ လှတယ် ထင်တာကြောင့် လိုလို၊ ၀ပြီး အဆီပိတ် ရောဂါထူမှာ ကြောက်တာကြောင့် လိုလိုနဲ့ အစားတွေ ရှောင်တာက စတတ် ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပုံမှန် မဟုတ်တော့တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့နည်းတွေ၊ အမူအကျင့်တွေကို ရောက်လာ တာပါပဲ။ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့အောင်လို့ လေ့ကျင့်ခန်း တွေကိုလည်း မတရား လုပ်တတ် ပါသေးတယ်။ သူများအမြင်မှာ ဘယ် လောက် ပဲ ပိန်ပိန် သူတို့စိတ် သူတို့ အမြင်မှာတော့ ပုံပျက်ပန်းပျက် ၀တယ်လို့ပဲ ယုံကြည် နေတတ်လို့ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့အောင် အစားမစား၊ လေ့ကျင့်ခန်း နင်းကန်လုပ်နဲ့ အတောမသတ်ပါဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်ကလည်း အရိုးပြိုင်းပြိုင်း၊ အရောင်အသွေး ခန်းခြောက်၊ မျက်တွင်း ငေါငေါနဲ့ ကြောက်စရာ ဖြစ်လာပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက် တွေကြား ဒီရောဂါ အဖြစ်များပြီး ယောက်ျားလေး မိန်းကလေး ဖြစ်နှုန်းက ၁း၁၀ ရှိပါတယ်။ သုံးပုံနှစ်ပုံမှာ ခန္ဓာ ကိုယ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ရောဂါ လက္ခဏာတွေ ပြတတ်ပြီး သုံးပုံတစ်ပုံ သတ်သေနှုန်း ရှိလို့ ကြောက်စရာ ကောင်းတဲ့ ရောဂါ အမျိုးအစားမှာ ပါဝင် ပါတယ်။
ရောဂါ အမည် တပ်ဖို့အတွက် လက္ခဏာတွေ (Diagnostic criteria) ကတော့
အရပ် နှင့် နှိုင်းယှဉ် ကိုယ်အလေးချိန် (Body Mass Index = Body weight in Kilograms divided by Height in Meters squared) 17.5 ထက် လျော့နည်းခြင်း
မိမိဖာသာ ဖြစ်စေသော ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျခြင်း (Self-induced weight loss) (ဥပမာ ၀စေသော အစာများကို မတရား ရှောင်ခြင်း၊ စားပြီး လက်ထိုးအန်ခြင်း၊ ၀မ်းနှုတ်ဆေး များ ပုံမှန် သုံးခြင်း၊ ကိုယ်လက် လေ့ကျင့်ခန်း တရားလွန် လုပ်ခြင်း၊ အစား မစားချင်အောင် ဆေး သောက်ခြင်း စသည်)
မိမိ ခန္ဓာကိုယ်ကို အလွန်အမင်း ၀နေသည်ဟု အမြင်မှား ယုံကြည်နေခြင်း (Body image distortion) ၀မည်ကို ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတိ အပိုလွန်နေခြင်း
သွေးထဲရှိ ဟော်မုန်းဓာတ်များ ကမောက်ကမ ဖြစ်ကုန်ခြင်း ပြဿနာများ (Endocrine disorders) (ဥပမာ ရာသီသွေး ထိန်ငုပ်ခြင်း၊ လိင်မှုကိစ္စ စိတ်မပါတော့ခြင်း၊ အင်ဆူလင် ထုတ်မှု ပုံမမှန်တော့ခြင်း စသည်)
အရွယ် မရောက်သေးသော (ရာသီသွေး မပေါ်သေးသော) မိန်းကလေးများတွင် အရွယ်ရောက် နောက်ကျခြင်း (Delayed or arrested puberty)
များသောအားဖြင့်တော့ ဒီရောဂါ ဖြစ်လာသူတွေမှာ အိမ်တွင်း မိသားစု အနေအထား ပြဿနာ တစ်ခုခု ရှိတတ် ပါတယ်။ စည်းကမ်း အလွန် တင်းကြပ်ခြင်း သို့မဟုတ် လျော့လျဲ လွန်းခြင်း၊ လူကြီးများက နေရာတကာ ၀င်ပါပြီး လုံးဝ လွတ်လပ်ခွင့် မပေးခြင်း၊ အချစ် လွန်ပြီး ကာဆီး ကာဆီး လုပ်လွန်းခြင်း၊ ပြဿနာ ထိပ်တိုက် တွေ့မှုများကို မဖြေရှင်းပဲ ရှောင်ရှားခြင်း တို့နဲ့ ဆက်နွှယ် တတ် ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ တော့လည်း မိဘကိုယ်တိုင်က အစားအသောက်ကို သတိထား လွန်းတာကြောင့် ကလေး တွေက အကြောက်လွန်ပြီး ဟိုဟာ မစားရဲ ဒီဟာမစားဝံ့ ရှောင်ကုန် တတ်ပါတယ်။
လူနာမှာ တွေ့ရတဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာတွေကတော့
ကြွက်သားများ သေးသိမ်လာခြင်း (ဥပမာ လက်မောင်းလက်ဖျံ)
ဆံပင်နှင့် ခြေသည်း လက်သည်းများ ပြတ်လွယ် ကျိုးလွယ်ခြင်း
လက်ဆစ် များတွင် အသားမာ တက်ခြင်း (လက်ထိုး အန်တတ် သူများတွင် တွေ့ရသော ရုပ်လက္ခဏာ)
အသားနှင့် မျက်သားများ ၀ါလာခြင်း
ကလေး အမွှေးကဲ့သို့ မွှေးညှင်း နုများ ပေါက်လာခြင်း (အထူးသဖြင့် ကျောပြင်တွင်)
လက်ဖျား ခြေဖျားများ ပြာနှမ်းလာခြင်း
သွေးပေါင်ချိန် ကျခြင်း (ပုံမှန် မဟုတ်)
ကိုယ်အပူချိန်ကျခြင်း (ပုံမှန် မဟုတ်)
တံတွေးကြိတ်များ ယောင်ယမ်းခြင်း (အထူးသဖြင့် နားနောက် နှင့် မေးရိုးအောက်)
အူများ အလုပ်မလုပ်တော့ခြင်း (၀မ်းနှုတ်ဆေး အလွဲသုံးမှုကြောင့်)
လက်ထုံ ခြေထုံ ဖြစ်ခြင်း တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အတွေ့ရများတဲ့ စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ဘုံလက္ခဏာ ကတော့ ဒီရောဂါ ဖြစ်တဲ့ ကလေးတွေဟာ အစား ထိန်းချုပ်ခြင်းကို သူတို့ဘ၀မှာ သူတို့ အစိုးရတဲ့ တစ်ခုတည်းသော ကိစ္စအနေနဲ့ အသုံးချ တာပါ။ ကျန်တာအားလုံး သူတို့ မထိန်းချုပ် နိုင်တာကို အစားထိုးတဲ့ သဘောပေါ့။ ကုရခက်တာ ဒါကြောင့်ပါ။ စိတ်ကုထုံး (Psycho-therapy)ကို အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ စိတ်ပညာရှင် (Clinical Psychologist) နဲ့ လပေါင်း များစွာ ကုရပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်း မှာပဲ အစာ ပြန်စား နိုင်အောင်လည်း ကုရ၊ ကူရပါတယ်။ အတင်း ဒုတ်နဲ့ ရိုက်ပြီး ကျွေးလို့ မရပါဘူး။ စိတ်က မစားနိုင်လို့ အင်မတန် ခက်ခဲ ပင်ပန်း ကြရှာပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ် ကလည်း မခံနိုင်လို့ မတိုင်းမဆ ကျွေးရင် အန္တရာယ် ဖြစ်တတ် ပါတယ်။ အစာ အာဟာရ ပညာရှင် (Dietitian) နဲ့ သေချာတိုင်ပင် တွက်ချက်ပြီးမှ စနစ်တကျ ကျွေးရတာပါ။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ဓာတ်ဆား အနေအထားကို အကြိမ် များစွာ သွေးဖောက် စစ်ဆေး ရပါတယ်။ နှလုံးခုန်နှုန်းကို ထိခိုက်ပြီး သေစေ တဲ့အထိ ဒုက္ခ ပေးနိုင်လို့ပါ။
ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေကတော့
နှလုံးခုန် မမှန်ခြင်း၊ သွေးပေါင်ကျ မူးမော် မေ့မျောခြင်း၊ နှလုံး ရုတ်တရက် ရပ်သွားနိုင်ခြင်း
အူများ ပုံမှန် အလုပ်မလုပ်ပဲ နှေးကွေး လာခြင်း၊ ၀မ်းအလွန်အမင်း ချုပ်ခြင်း
ဟော်မုန်းများ ကယောက် ကယက် ဖြစ်ကုန်ပြီး ၄င်းတို့၏ လုပ်နေကျ အလုပ်များ မှားယွင်း ကုန်ခြင်း (ဥပမာ သိုင်းရွိုက် ဟော်မုန်း နည်းခြင်း များခြင်း)
ကိုယ်ခန္ဓာ ကြီးထွားမှု တန့်သွားခြင်း
အရိုးပွ ဆတ် ကျိုးလွယ်ခြင်း
ကိုယ်ဝန် မရနိုင်ခြင်း၊ ရပါကလည်း ကလေး အာဟာရ ချို့တဲ့ကာ မွေးစ အလေးချိန် လျော့နည်းခြင်း
ဦးနှောက် ထုထည် လျော့ကျ သေးသိမ်လာခြင်း (အစား ပုံမှန် ပြန်စားရင် တဖြည်းဖြည်း ပြန်ကောင်းပါတယ်)
သွေးဆဲလ်များ လျော့နည်း၍ သွေးအားနည်း၊ ခုခံအားနည်း၊ သွေးမတိတ် ဖြစ်ခြင်း-
“အစားမစားနိုင်သော ရောဂါ (Anorexia Nervosa)” ဖြစ်နေတာ သေချာတယ်လို့ ရောဂါ အမည်တပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ သေသေချာချာ ကုရပါတယ်။ မိသားစုကလည်း စိတ်ရှည်လက်ရှည် ပါဝင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဘယ်သူ့ ဘယ်သူမှ အပြစ်တင် နေစရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြဿနာရယ်လို့ သိပြီးတဲ့နောက် ဒါကို လက်ခံဖို့နဲ့ ရှေ့လျှောက် ဘာလုပ်မယ် ဆိုတာ ညီညီ ညွတ်ညွတ် သဘောတူဖို့၊ လက်တွေ့ လုပ်နိုင်တာ တွေ စလုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကြာရှည် ကုရတဲ့ ရောဂါပါ။
မြန်မာနိုင်ငံ မှာတုံးက ဒီရောဂါ ရှိတယ်လို့ မကြားဖူး ခဲ့တာဟာ တကယ်ပဲ မရှိတာလား၊ ရှိလျက်နဲ့ မသိတာ လား မပြောတတ် ပါဘူး။ စာဖတ် သူများရဲ့ အတွေ့အကြုံကို ကြားသိလိုပါတယ်။
Semple, D., Smyth, R., Burns, J., Darjee, R. & McIntosh, A. (2005). Oxford Handbook of Psychiatry, Oxford: University Press.
Posted by Nu Thwe
Bulimia က ဒီရောဂါနဲ့ တစ်ခုတည်းပဲလား တခြားစီလား သိပါရစေ။
မတူပါဘူး။ Eating Disorders ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတော့ ပါဝင်ပါတယ်။ Bulimia က အရိုးပေါ် အရေတင် ပုံစံ မဟုတ်တတ်ပါဘူး။ အချိန်တိုအတွင်းမှာ အစားတွေ မတရားစား (Binge eating) ပြီးမှ ပြန်အန်ထုတ်တာပါ။ စားချင်တဲ့ စိတ်ကိုလည်း မနိုင်၊ စားပြီးရင်လည်း စိတ်မှာ အပြစ်ရှိသလို ခံစားရလို့ပါ။
ဒီလိုကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပို့စ်တွေဖတ်ရတာ အရမ်းတန်ဖိုးရှိပါတယ် ..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ..ကျတော်ဘလေ့ာကိုလဲ အလည်ဖိတ်ခေါ်သွားပါတယ် www.royalcherry.blogspot.com
United Nations' first Global Handwashing Day
Prohibition against import, processing, distributi...
TELEVISION, COMPUTER VISION AND YOUR EYES
Sunshine, Skin and Tomato
Fake Penicillin Injections in Market
Essential Nutrients for Healthy Living (1)